ဟုမ်းမိတ် များ ကို စီးပွား ဖြစ်ထုတ်လုပ်လာ | Freedom News Group
by FNG on January 6, 2011	Kခိုင်၊ ၊မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် လူငယ် စုံတွဲ များ ၏ ချစ်တင်း နှော မှု နှင့် လိင်ဆက်မှု များ
ကို မိုဘိုင်း ဟန်းဆက် ကင်မရာ၊ဗီဒီယို ကင်မရာငယ်များ ဖြင့် အပျော်မှတ်တမ်း တင်ပြီး ဟုမ်းမိတ်
အခွေများအနေဖြင့် ယခင် က မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ရာမှ နောက် ပိုင်း တွင် တကယ် သရုပ်ဆောင်
ကာ ဗီဒီယို ရိုက်ယူ ပြီး နောက် ဈေးကွက် အတွင်း သို့ စီဒီ ၊ဒီဗီဒီများ ဖြင့် ဖြန့် ချိလာသည် ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ဟုမ်းမိတ် အခွေများ ကို ရန်ကုန် မြို့ ရှိ ဗီဒီယို အခွေ ဆိုင် နှင့် လမ်းဘေး ဒီဗီဒီ ခွေ အရောင်း ဆိုင် အချို့
တွင် ၀ယ်ယူ၊ ငှားရမ်း နိုင်သည် ဟု သိရသည်။
အခွေ အငှား ဆိုင်များ တွင် လှို့ ဝှက် ငှား ရမ်းသည့်
ဟုမ်း မိတ် ဗီစီဒီ အခွေ ငှားရမ်း ခ မှ တစ်ည လျှင်
ငါးရာကျပ် ဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်း ၁၀ ခု ခန့် ပါသည့် ဒီဗီဒီ
အခွေ ကိုမူ ငွေကျပ် ငါးထောင်ခန့် ကျသည် ဟု သိရသည်။
ထို ဟုမ်းမိတ် အခွေ ကို ကြည့်ရှု ဖူးသူ တစ်ဦးက “ တချို့ ကောင်မလေးတွေ တော့ တကယ် သရုပ်ဆောက်တာ
ရှိတယ် ၊ ပိုက်ဆံရလား မရလား မသိဘူး ၊ တချို့ အခွေ တွေ မှာ တော့ ပြည့်တန် ဆာ နဲ့ ကေတီဗီ ကကောင်
မလေး တွေ သရုပ်ဆောင်ထားတာ” ဟုပြောသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းခါ စ က အဖော်
အချွတ်ဗီဒီယို များ ကို စီစစ်ဖြတ်တောက် ခဲ့ရာ အနာဂတ်
ဟင်းလင်း ပြင် AIDS ပညာပေး ဗီဒီယို မှ သရုပ်ဆောင် အချို့ နှင့် သရုပ်ဆောင် ခိုင်ခင်ဦး တို့ မှာ
အနုပညာလုပ်ငန်း များ ပိတ်ပင် ခံခဲ့ရသည်။
ဟုမ်းမိတ် ဗီဒီယို ခွေများ ကို စီးပွား ဖြစ် ထုတ်လုပ်လာမှု နှင့် ပတ်သက်၍ အထက်တန်းပြ ဆရာမ တစ်ဦး
က “လူငယ်တွေ ပျက်စီး မယ့် လမ်းစပဲ” ဟု ပြေသည်။ ရန်ကုန် မြို့ မှ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂမ်မာ လူငယ် တစ်
ဦးက လူ အခြား နိုင်ငံ တွေ မှာတော့ တရားဝင် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးဖြန့် ချီခွင့်ရှိတယ် ၊ကြည့်ရှု ခွင့် အသက် အရွယ်
နဲ့သရုပ်ဆောင် အသက်အရွယ် ကိုတော့ ကန့် သတ်ထား တာပေါ့၊ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း နိုင်ငံမှာ လည်း ရှိတယ်
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လည်း တရားဝင် သတ်သတ် မှတ်မှတ် ရှိသင့် နေပြီ ဒီအခွေတွေ ကြည့် လို့ဘာမှ မဖြစ်သွား
ဘူး” ဟု သူ့ အမြင် ကို ပြောသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အင်တာ နက် ခေတ်ဦး ပိုင်းက Pornography ဆိုတ်များ ကို ပိတ်ဆို့ ထားထားသော် လည်း
၂၀၀၆ ခုနှစ် နောက် ပိုင်းတွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ပေး ခဲ့သည်။ Metaporn နှင့် Redtube များမှာ မြန်မာ နိုင်ငံ
တွင် လူကြည့် အများ ဆုံး အင်တာနက် လိင်ဆက်ဆံသည့် ဖျော်ဖြေရေး ဆိုက်များ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ဆိုတ်များ တွင်မူ ဒေါက်တာ ချက်ကြီးနှင့် နဂါးနက် တို့ မှာ နာမည် ကြီးသည်။
လတ်တလော တွင် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် တစ်ဦး နှင့် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်
တစ်ဦး ၏ ဖခင်တို့ ချစ်တင်းနှော ပုံမှာ အငှားရ ဆုံး ဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: ဖျော်ဖြေရေး, ပြည်တွင်းသတင်း	← ဂျပန် ကား များ နေရာတွင် တရုတ်-မြန်မာ ဖက်စပ် ကားများ ဖြင့် အစားထိုးမည်
ကိုးကြိမ်မြောက် City FM ဆုပေးပွဲ →
ကြည့်နေတာ ဒီcomment မှာ သန်းရွှေမယားပါသား သေချင်းဆိုးနအဖခွေး ဂျိုကား ကိုမတွေ့လို့ ဒီကောင့်ကိုကြည့်ရတာ စိတ်မနှံ့ဘူးထင်တယ် ကျုပ်က comment ရေးမှာမဟုတ်ဖူး ဒီမအေလိုးသန်းရွှေရဲ့မယားပါသားကိုဆဲချင်လို့ဝင်လာတာ ကြည့်နေတာတော့ကြာပြီး စောက်ချိုးကမပြေ နအဖကိုအဖေခေါ်ပြီး
January 24, 2011	star	#
ကိုသာထေး ၇ယ်တကူးတက၇ှင်းပြမနေနဲ.တော. အကုန်လုံးသိကြပါတယ်လို….
January 23, 2011	tartay	#
အဲဒီ simple. နဲ့ နောက် သုံးလေးယောက်ရှိသေးတယ်…အဲဒီကောင်တွေက ဖါခေါင်းလဲလုပ်တယ်.ဖဲဒိုင်ခံတယ်.ဖာမွေး
တယ်..စစ်တပ်ထဲက ရဲဘော်သားသမီးလေးတွေ.အသက်က ၁၅.၁၆. ၁၇. ၁၈.၂၀.ကနေ ၃၈ထိ..တပ်ထဲမှာစီးပွားရေး
January 9, 2011	Siyindo	#
ဒါမျိူးကြတော့ Ko Simple ကြီး ငြိမ်နေတယ်.သူလဲဝင်ဆွဲနေတယ်ထင်တယ်
January 8, 2011	လူမိုက်	#
စားစရာမရှိ တခြားနည်းနဲ့ ရှာစားကြပါလား…..အရှက်အကြောက်ကို မရှိအောင် ရောင်းစားရအောင်…..
ဟိရိသြတပ္ဂ အရှက်အကြောက်တရားကင်းမဲ့ လာရင်……..ရှင်တော်ဟောခဲ့ တယ်….လောကစောင့် တရားတဲ့ 
ဒီ ၂ ပါးမရှိတော့ ရင်………လောကဆိတ်သုန်းတော့ တာဘဲ……ရှင်ဘုရင်ကစ သူဖုန်းစားအဆုံး..အရှက်အကြောက်ရှိရမယ်..ခုတော့ ခေါ်င်ကမှမိုးမလုံတော့ ..သွားပီပေါ့ ကွာ….( ) ပြည်ဖြစ်တော့ မယ်…အမျိုးကိုချစ်သူများ..ဘာသာ ..သာသနာကိုလေးစားသူများ….ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကမဆို..ဘယ်ဝါဒရှိတဲ့ သူတွေမဆို….မိမိတို့ ရဲ့ နောင်လာမည့် သားသမီး မြေးမြစ်များဧ။် နောင်ရေးကိုထောက်ရှုရ်ျ ၀ိုင်းဝန်းတားဆီးစောင့် ရှောက်ပေးကြပါဗျာ…ယုတ်မာစွာစီးပွားရှာချင်သော သူများအား ၀ိုင်းဝန်းဆုံးမကြပါ…စားစရာမရှိ လို့ ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ရတာ အထင်မသေးပါဘူး..အရင်းအနှီးရလာရင် တခြားဟာလုပ်ပေါ့ ….စာနာပါတယ်….ဖာမဟုတ်တဲ့ ဟာတွေ ဖာစိတ်မွေးလာရင်တော့သောက်ကျင့် ယုတ်တာပါဘဲ..သောက်ရှက်မရှိတာပါဘဲ အဲ သောက်ကျင့် ယုတ်တဲ့ ဟာတွေကို..ပြင်းထန်စွာ ၀ိုင်းဝန်းဆုံးမပေးကြပါ
January 8, 2011	ko ko zaw.....m'sia	#
January 7, 2011	သီဟ	#
“ လတ်တလော တွင် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် တစ်ဦး နှင့် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်
တစ်ဦး ၏ ဖခင်တို့ ချစ်တင်းနှော ပုံမှာ အငှားရ ဆုံး ဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။ ” FNG အပေါ်က ပြောထားတဲ့ Movie တော့ မကြည့်ဘူးသေးဘူး….။ အခုနောက်ပိုင်း ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နဲ့ ဟိန်းဝေယံ အဖေ နဲ့ ( ဝိုင်းစုနဲ့ ဟိန်းဝေယံ ခိုးပြေးကြတာကို သဘောမတူလို့ နှစ်ဘက်မိဘ ညှိနေကြတဲ့ ) ဖုန်းပြောတဲ့ အသံဖိုင်တော့ နားထောင်ဖူးတယ်။
January 7, 2011	tartay	#
ဒီဆိုက်ဒ် မှာ…ဆင်ပဲယ် ဆိုတဲ့ကောင်တို့…နောက်ရှိသေးတယ်..သုံးလေးကောင်ကတက်တက်
January 6, 2011	ဘာလာလာပွကြီး	#
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးမလုပ်ရင်ပြီးရော..။ လူငယ်တွေ ဖာပဲချချ၊ ကြိုက်ကုန်းပဲလုပ်လုပ်၊ ဆေးပဲချချ၊ အစိုးရက ဂရုကိုမစိုက်တာ။ လူ့အရင်းအမြစ်တွေကို အဲဒီလို အညွှန့်ချိုးထားတာ။ လူငယ်တွေတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဘယ်နှစ်ခု ကြားဖူးကြလဲ။
January 6, 2011	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,726,942 hits